Nezvedu - Guangzhou MCM Certification ＆ Kuyedza Co., Ltd.
Minimum Unganidza kusvika Maximum
MCM inonamira padanho rekuvandudza iro bhizinesi diki rinofanira kuramba richivandudza uye richisimudzira simba rekuzove rakakura uye risingade kubudirira nekukurumidza. MCM inochengetedza kuenzana kwayo uye inotarisa pakupa kuyedza uye kupa chitupa sevhisi yezvigadzirwa zvakasiyana zvebhatiri nenzira yakadzikama. Neiyi nzira chete ndipo panogona kuve neMMM inoitira vatengi vayo uye nekupa mhinduro dzakakura nenzira inoramba iripo.
Guangzhou MCM certification & yekuyedza kambani, inoumbwa neye multidisciplinary timu vanozivikanwa nekupa yekutanga-mwero masevhisi mune epasirese zvigadzirwa zvigadzirwa kuyedza uye chitupa. Seimwe yehunyanzvi hwakazvimiririra hwechitatu-bato reboka mumabhatiri zvigadzirwa zvekuyedza munda, takave takagamuchirwa neCNAS, CMA, CBTL, CTIA yakavakirwa paIO / IEC 17025 & 17020 yemhando yekutarisira system.
CHII CHINOZVIKWA MCM
Chirevo Zvese zvakanaka pakutanga, asi vashoma vanozviratidza kuva vakadaro pakupedzisira, vakatorwa mubhuku reNziyo, muunganidzwa wekare wechiChinese wenhetembo, kwave kutenda kwechikwata cheMMM kubvira pakavambwa muna 2003. Ichi chitendero chave chiri kutikurudzira kuti titarise zvakanyanya pakati pevezera. MCM inonamira kune yemhando yebasa iyo inoramba ichivandudza uye ichiwedzera kusimba, pamwe nekuramba uchiita zvitsva. MCM inogara ichishamisa vatengi mune zvese zvinhu. Zvakare, MCM ichaita nehana kushandira bhizinesi rega rega zvichienderana nezvinodiwa nevatengi, ichipa basa repamusoro kutenderera kwepasirese.